Inye into onokungayiqondi kukuba ibhiya elungileyo Route ngu Train zingafunyanwa ezininzi kwizikhululo zikaloliwe. I Sheffield Tap yenye the best, obonisa ngayo 30 casks kunye needrafti - ezinye zazo zibonisa ukhetho ezivela yazo zasekuhlaleni ezifihla kakhulu. Wena babekwazi kuloliwe ndiye kubona ezinye zazo ... okanye bahlale nje abeke uze uchithe ixesha elingakumbi isampulu ngazo. kanjani cool?!
Isikhululo sikaloliwe ngu 10 imizuzu eyi evela cafe, ngoko ke akukho Akumangalisi ke phezu Beer Route ngu Train – Beers Best eYurophu.
Ukumiselwa okwangoku eyale Sam Smith Old weAluminiyam. pubs yabo kudlule-ku izakhiwo ezihle, iindidi zemveli, nezinto zangaphakathi ezimnandi. Akukho iintlobo enkulu, iminikelo nje brilliant ukusuka utshwala yazo ku Tadcaster, Yorkshire.
Nangona utshwala iye yala maxesha ukususela 1993, iikhilomitha of izisele lokuguga aseleyo komhlaba ziyingxenye olukhenketho. Ingqushu engaphantsi komhlaba iphelela kwindawo evulekileyo yomthi kunye nemibhobho emikhulu yomthi yohlobo olwalusetyenziselwa ukuguga yonke iPilsner Urquell.
Ngaba akungenise kungaziwa? Umqombothi ubhedu eJamani hayi ngo eMunich. Germany ine iintlobo elikhulu Beers ezingaqhelekanga. Abaninzi lizwe amaHebhere ngemihla ngokumangalisayo elungileyo. Kodwa asingabo bonke beer kunokuba sibe yingangamsha, nkqu nasemhlabeni apho ibhiya lilivo. Ukuba ufuna ezininzi kwaye uthanda utywala bakho kunye nomlinganiswa kunye sizzle, yenza wena favor kunye ekucwangcisweni uhambo Kwilizwe laseBavaria, apho utywala yinxalenye isiko lendawo kwaye agaye ngabantu ngokwenene amabali ukuxelela.
Amashumi asixhenxe ananye kwaye aphakathi nendawo ukusebenza kule nxalenye yaseBavaria. Ezinye zazo asusela 1400s. Elinanye kubo baba noba esekwe ebandleni, sebenzisa yi-monasteries, okanye umnini nobility. Ezintathu fambisiwaka ngxi zizigwili German kwaye omnye lo Abbey utshwala indala ehlabathini. Lower EBavaria na ubuncwane obufihliweyo xa kufikwa beer.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye nombhalo kunye nje zisinika ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-beers-route-europe%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)